HomeHoryaalka IngiriiskaPaul Pogba oo iska indho tiray Ole Gunnar Solskjaer kadib guuldaradii Liverpool.
October 27, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa in uuna la hadlin tababaraha kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer kadib guuldaradii 5/0 ahayd ee Axadii ka soo gaartay kooxda Liverpool kulan ka tirsanaa horyaalka premier League.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France ayaa laga saaray line-upka 1-aad ee Reds ka hor inta aan la soo galin qeybta nasashada, markaasoo kooxda martida loo ahaa ay durba afar gool lagu lahaa.
Pogba ayaa kaliya qaatay 15 daqiiqo kulankii Old Trafford, isagoo qaatay kaarka cas oo toos ah ka dib markii uu khalad uu ku galay Naby Keita .
Sida laga soo xigtay The Sun , ku guulaysta koobka adduunka ayaa raali galin siiyay saaxiibadiisa qolka labiska ka dib guuldaradii 5-ta gool ahayd, taasoo cadaadiska saartay Solskjaer.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sheegaysa in 28-sano jirkaan uu iska diiday macalinkiisa, kaasoo haatan lumiyay taageerada ciyaartoy badan oo waaweyn oo kooxda ah xilli uu ku jiro qaab ciyaareed liita.
Qandaraaska Pogba ee 20-ka jeer ee horyaalka Ingariiska ayaa ku eg bisha June ee soo socota, mana muuqato inuu leeyahay qorshe degdeg ah oo uu qalinka ugu duugayo heshiis kordhin.